Isaga oo dalka ka maqan ayuu NAV Lacagta A.A.P ka qaadanayay: Maxkamad ayaa lasoo taagayaa - NorSom News
Home Økonimi/Dhaqaale Isaga oo dalka ka maqan ayuu NAV Lacagta A.A.P ka qaadanayay: Maxkamad...
Waxaa maxkamada Fredrikstad dhawaan lasoo taagi doonaa nin 69-sano jir ah oo ku eedeysan in sifo aan sharci aheyn uu NAV uga qaatay 340.000 kr oo lacagta Norway ah.
Ninkan ayaa ku eedeysan in lacagta dadka shaqada xanuun ama dhaawac dartiis uga fariisto ee Arbeidsavklaringspenger uu ka qaadan jiray NAV, isaga oo aan NAV u sheegin inuu ku noolaa dalka Thailand.
Sharciga NAV ayaa dhigaya in qofku uusan lacagta A.A.P qaadan karin, hadii uu u guuro meel ka baxsan dalalka EU-da iyo dalka Switzerland. Ninkan ayaa xiliga uu lacagta ka qaadanayay NAV ku noolaa dalka Thailand, waxeyna hey´addaha xeer ilaalintu kusoo oogi doonaa in NAV uu si khiyaano ah uga qaatay lacag uusan xaq u laheyn.
Xeer ilaalinta booliska ayaa sheegay in ninkan uu NAV usoo buuxin jiray kaarka diiwaangalinta ee Meldekort-ka, waxaana lacagta uu qaadanayo looga xisaabin jiray macluumaadka uu kusoo gudbiyo meldekort-ka.
Booliska ayaa ninkan kusoo oogi doono dacwad kale oo la xiriirto inuu hey´addaha dowlada u gudbiyay macluumaad aan sax aheyn.
Previous articleMaku wareertay micnaha midabada xeerarka safarka ee dalalka Yurub: Waa kuwan micnahooda
Next articleUDI: Waxaan isku diyaarinay qoxooti dalkan nooga soo burqada.